Madaxweyne Farmaajo oo amray in 3 maalmood calanka hoos loo dhigo, kana tacsiyeeyay geerida Cali Mahdi – Kalfadhi
Madaxweyne Farmaajo oo amray in 3 maalmood calanka hoos loo dhigo, kana tacsiyeeyay geerida Cali Mahdi
March 11, 2021 Hassan Istiila
Madaxweynaha Jamuhuuriyadda Soomaaliya Maxameed Cabdullahi Farmaajo, ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi, oo xalay ku geeryooday isbitaal ku yaala magaalada Nairobi.
“Waa geeri xanuun badan oo si weyn ay u wada dareemeen shacabka iyo dowladda Soomaaliya. Alle ha u naxariisto Madaxweyne Cali Mahdi, waxa uu door weyn ka soo qaatay dowladnimada dalka. Waxaan ku xasuusanaynaa sida ay uga go’nayd in dib loo sooceliyo dowladnimada Soomaaliyeed oo uu dadaal muuqda ku bixiyey.”
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in muddo saddex cisho ah hoos loo dhigayo Calanka Jamhuuriyadda si aan u muujinno murugada geeridan ku timid Madaxweynihii hore ee dalka, iyadoo la magacaabayo guddi ka shaqeeya Aas-Qaran oo loo sameeyo Marxuumka, si loo maamuuso dadaalkii uu ku bixiyey dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Akhriso: Taariikh kooban oo ku saabsan madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo maanta ku geeryooday Nairobi
RW Rooble oo magacaabay Guddiga ka shaqeeya aas Qaran oo loo sameeynayo madaxweynihii hore ee dalka